Su'aasha 1aad: Sideen u yareyn karnaa xirashada qafis alxanka? 1. Waa wax iska caadi ah soo saarayaasha mashiinka alxanka qafis inay xirtaan qaybo inta ay isticmaalayaan. Si loo yareeyo xirashada qaybaha dhexdooda, waa inaan fiiro gaar ah u yeelanaa faahfaahinta, si waxqabadka mashiinka alxanka qafis loo isticmaali karo, shaqaaluhuna ...
Dib u isticmaal bacaha balaastigga ah: dooro waxoogaa baagag adag ah kuna qaado boorsadaada si aad ugu adeegato boorsooyinkaaga halkii aad ka adeegan laheyd boorsooyinka aad keensato. Bacaha balaastigga ah ee dib loo isticmaali karo way fududahay in la qaado (waxay ku jiri karaan boorso yar ama xitaa jeeb!), Illaa iyo intaad wax yar sidato, waxaad iibsan kartaa lo ...
Goob Farsamo: Hal-abuurnimadu waxay la xiriirtaa xargo-iyo-loop oo isku xiraya ugu yaraan laba qaybood, sida suunka xubinta hore. Gundhig: Jillaab-iyo-suun waa nooc ka mid ah suunka, suunka, iyo qaybo kale oo loogu talagalay in lagu sii daayo adeegsiga barnaamijyo badan oo kala duwan. Xajinta waa ini ...
FRP waa maado polymer (Ingiriis: Fiberglass Reinforcde Plastics ama FRP). Weelka qashinka lagu ururiyo ee walxahaan laga sameeyay ayaa ah qashinka marooyinka muraayadaha. Qalabka FRP waxaa markii ugu horreysay loo adeegsaday difaaca qaranka, aerospace, duulista iyo beeraha kale. Iyadoo horumarka sayniska iyo te ...
Aqoon ku saabsan boorsada Skip
Boorso boorso, sida magaca ka muuqata, waa jawaano qashin ah. Boorso yar ayaa u sahleysa kumannaan qoys. Waxay sidoo kale bixisaa dammaanad muhiim u ah ilaalinta deegaanka iyo xitaa waxay fududeeysaa dib-u-warshadaynta qashinka iyo kala-soocidda. Bacaha qashinka waxaa badanaa laga sameeyaa caag, halka mid caag ah ...
Ujeedada Meijer waa inay “dhaafto boorsada” oo ay yareyso qashinka caagga ah
Meijer waxay la shaqeysay tafaariiqleyda kale ee cuntada iyo daroogada, waxay ku biirtay isbaheysiga sidii lammaane taageera, waxayna dib u cusbooneysiisay boorsada tafaariiqda si ay uga caawiso yareynta qashinka caagga ah. Isbahaysiga ayaa la bilaabay xagaaga si loo tijaabiyo xulashooyinka bacaha wax lagu iibsado ee bacda la adeegsan karo ee ay hadda isticmaalaan tafaariiqleyda waaweyn ee dalka oo idil ....
Baote Asbestos Bag Qashin - Daaweynta Qashinka Asbestos
Waxaa qoray admin on 21-03-08
Soosaarka bacda qashinka Asbestos - Ku soo iibso bacdaada qashinka asbestos qiimo tartan ah oo Baote ah. Dhammaan alaabtayada keydka ku jirta ayaa si dhakhso leh laguugu soo diri doonaa adiga. Kaliya maahan inaan ku gaarsiino boorsooyinkaaga asbestos Yurub oo dhan, laakiin sidoo kale meelo fogfog. Boorsooyinka laga qaado asbestos ka sokow, waxaan sidoo kale ...
Mashiinka Xiirashada Digirta Baaxadda Leh - zx-dl1
Waxaan si guul leh ula galnay heshiis iskaashi agrimachinery talyaani ah si aan u iibino diirkeenna ballaadhan ee qaasatan Yurub.
Horumarinta taariikhiga ah iyo taxaddarrada mashiinka sameynta tuubbada
Mashiinka samaynta biibiile sibidhka alaabada ugu muhiimsan waa qalabka tooska u sameeya biibiile extrusion, hal iyo labalaab qalabka qalabka gariirka mandrel, qalabka birqeynta biriijka laba jibbaaran, mashiinka alxanka qaarkiis bir birqaya, mashiinka alxanka birta, mashiinka alxanka mesh, ...
Tilmaamo farsamo iyo taxaddar
Mabda'a shaqada ee mashiinka tuubbada sibidhka ah ee lafdhabarka ah ee tooska ah waa sida soo socota: iyadoo la adeegsanayo dhaqdhaqaaqa wareega ee mashiinka weyn ee mashiinka tuubbada, ka soo saarista shubka adag ee qalalan iyada oo loo marayo madaxa mashiinka si loo soo saaro biibiile sibidh ah oo sibidh ah loo xoojiyo iyo qaabka loo xoojiyo oo ay weheliyaan ...
Nidaamka samaynta biibiile extrusion radial taagan
Nidaamka sameynta biibiile extrusion radial taagan waa mid ka mid ah geedi socodka soo saarida la taaban karo iyo la xoojiyay tuubooyinka bullaacadaha la taaban karo, inta badan soo saarida tuubooyin dhexroor yar oo dhexroor ah 300 - 1200. Faa'iidada ugu weyn ee ay leedahay waa in xawaaraha wax soo saarka waa mid aad u dhakhso badan, wax soo saarka waa .. .
BAOTE CONCRETE PAMP WASHOUT Bag
BAOTE CONCRETE BAMBARKA WASHOUT BAG ---- QAFIMAADKA QAAB-DHAWRKA SHAQADA BAASHKA ADUUNKA! Bacda weelka lagu dhaqo ee la taaban karo waa maxay? ---- Bacda Dharka lagu dhaqo ee la taaban karo waxay bixisaa xal deg deg ah oo ku habboon oo ay ku jiraan dhammaan qashinka wasakhda la taaban karo. Bacda ayaa si fudud loo hoos dhigay ...
Hex handarraabbadeedii, Gawaarida Gawaarida, U Bolts, Lag Bolts, Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah, Qaab dhismeedka,